Lacag bixinta Apple ayaa maanta la gaareysa dadka isticmaala Mexico | Waxaan ka socdaa mac
Apple Pay wuxuu gaarayaa dadka isticmaala Mexico maanta
Shirkadda Cupertino ayaa hadda billowday Apple Pay oo loogu talagalay dadka isticmaala shirkadda ee Mexico. Dareenkan, markaan galno Websaydhka waddanka Apple ma tilmaamayo meel kasta in adeeggu firfircoon yahay, laakiin dhowr isticmaale ayaa la xiriiray Citibanamex hay'ad bangi, kaas oo sheegay in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 23-ka bisha labaad ee fooda inagu soo haysa ay heystaan ​​adeeggu mid firfircoon
Waxaa macquul ah in hawlgalku uu dhici doono saacadaha soo socda ama xitaa inta aan qormadan maqaalka ku qorayno xaqiijinta bangiga waxay si cad u muujineysaa in wax waliba diyaar yihiin in lagu daahfurayo adeegan lacag bixinta Apple shirkaddaada. Isticmaalayaasha waxay awoodi doonaan inay ku daraan kaararka deynta iyo MasterCard.
Bogga Apple ayaa tilmaamtay in adeegan la heli doono sanadka 2021 waxayna umuuqataa inay sidan noqon doonto. Apple waxay adeegan ku leedahay wadamo badan Mexicona waxay ka mid ahayd kuwa aan firfircooneyn, sidaa darteed runtii waa wax lagu farxo in la arko sida adeeg muhiim ah u yimaado si loo sameeyo amaan, hufan iyo wixii ka sareeya dhammaan lacagaha fudud ee Apple Pay.
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ CADAYNTA CITIBANAMEX
Berri waxay sii daayaan Apple Pay ee Mexico! #ApplePayMexico pic.twitter.com/qOCZDYEIkV
- Lalö Röjaz (B)  (@laLozrb) February 22, 2021
Dhinaca kale, waxaa muhiim ah in la muujiyo muhiimada ganacsatadu leeyihiin aalado la jaan qaadaya qaabkan lacag bixinta. Taleefannada taleefannada gacanta ayaa muhiim u ah in lagu fuliyo noocyada lacag-bixinta ee iPhone ama Apple Watch, sidaas bangiyada waa inay siiyaan ganacsiyada aaladda noocaan ah.
Waddankeenna, waa run in ganacsiyada intiisa badani ay leeyihiin taleefanno xog-ururin ah oo la heli karo muddo dheer si ay lacag u bixiyaan, hadda Cudurka faafa ee COVID-19, bixinta noocan ah si aad ah ayey u kordhay waxaana rajeyneynaa inay sii wado inay kororto si loo fududeeyo wax iibsi kasta. Waa la arki doonaa in si rasmi ah ay u xaqiijisay Apple laakiin wax waliba waxay muujinayaan inay noqon doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple Pay wuxuu gaarayaa dadka isticmaala Mexico maanta
Akhristaha kaarka SD iyo isku xira HDMI ee MacBooks cusub?
Apple wuxuu tallaabo ka qaadaa malwareerka "Silver Sparrow" ee weerara M1 Macs